The skyscraper nke gaara dara mgbe | Apg29
The skyscraper nke gaara dara mgbe
N'agbanyeghị otú ọgaranya onye dị otú a "nwere" ọ dị nnọọ a anuri obere ohere nchekwa na a na kọmputa usoro.
"Kagbuo ego ma na-Cash Smart!" na niile a na ọnwụ n'ihi na azụmahịa. Ọ bụ naanị ndị anyaukwu na anoghi n'ulo oba na-erite uru site na ya.
The ụlọ ebe American Express na-headquartered na New York nwere aha dị iche iche. Atọ World Financial Center, American Express Tower, na mgbe e mesịrị na 200 Vesey Street. The ụlọ a na-mere site-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Cesar Pelli na dechara na 1986. Ọ na-e mebiri n'oge September 11 agha na ndị kpọpụrụ nwa oge n'ihi di ike. Ọ bụ akụkụ nke ụlọ mgbagwoju, the World Financial Center. Na mbụ, na-esote ụzọ ochie World Trade Center ejima elu. 1993 gbawakwara a bọmbụ na World Trade Center otu n'ime ejima ụlọ nche. Ọ bụ a na-emezughị mgbalị-eyi ọha egwu iji nweta otu ụlọ elu daa na ndị ọzọ.
Dị ka ọchịchọ ịmata bụ na American Express ụlọ ahụ n'oge gara aga, ụlọ ọrụ nke N'ihi na ego nsogbu odida akụ Lehman Brothers. Lehman Brothers weghaara mgbe odida nke British akụ Barclays. Ọ bụrụ na n'ọnọdụ e eduzi ma ọ bụ ekwesịghị ekwesị-eyi ọha egwu megide American Express ama eleghị anya kemgbe mkpu ákwá. American Express bụ ya bụ ọgaranya kaadị ụlọ ọrụ. Ma eleghị anya, ha na-oké njọ agaghịkwa kemgbe ọgaranya ebe ha digital ego ga pura akakade maka a ga-ekwe omume achikota ụjọ nkuzi megide anoghi n'ulo oba, data emmepe na ego ndị ọzọ ụlọ ọrụ.
Na cashless ụwa nile bụ "hà ka". The cashless ndekọ ndị computationally hà.
The skyscraper nke gaara dara mgbe adịkwa $ 100 na a cashless ida mgbe "Richard Rich" nwere ike ida ọtụtụ nde. Ọ nwere ike jiri ya tụnyere iberibe akwụkwọ na nke ọ na-ekwu otú ihe onye nwere. Akwụkwọ discs nwere ike e dere na ndị ọzọ, ma ndị na kọmputa dabeere ndekọ ndị na a cashless na ichekwa ego na bank ọdachi kpamkpam na-abaghị uru. N'agbanyeghị otú ọgaranya onye dị otú a "nwere" ọ dị nnọọ a anuri obere ohere nchekwa na a na kọmputa usoro. Ego na karịsịa ọlaedo na ọlaọcha, Otú ọ dị, proportional ka ihu ha, anụ ahụ na ezi uru.
A sị na ọ n'okpuru ụfọdụ ndị ọzọ ọnọdụ (bọmbụ ma ọ bụ ụgbọelu) a kwe omume iji nweta otu nke Ejima ụlọ nche (ụma ma ọ bụ mmadụ na mberede) na-ada n'akụkụ na-azọpịa ihe American Express Tower? Gịnị bụ puru na a-eyi ọha egwu hijacked ugbo elu (ụma ma ọ bụ mmadụ na mberede) nwere ike ebule ahụ na American Express n'isi ụlọ ọrụ na ebe nke otu n'ime ejima ụlọ nche nke World Trade Center? Olee otú ọ ga-emetụtarịrị na American Express, kaadị ahịa, ụwa na echiche nke kontantlösheten? Na-ede na-adịghị eru zaa ọ bụla nke ajụjụ ndị a ma kama ka ha. Ihe niile na-egosi otú na-adịghị ike na-centralized cashless systems na ya unprotected isi ụlọ ọrụ ma data emmepe.
Gịnị mendacious ụzọ iji gosi onwe gị!
Ebe a obere atụ si a afọ ole na ole gara aga na otu mgbede akwụkwọ akụkọ bụ ebe ma akwụkwọ akụkọ na Riksbank-egosipụta onwe ha ọhụma na manipulates na-agụ akwụkwọ. Ọ bụ na Aftonbladet ikpeazụ September 2010. Isiokwu nwere ike na-agụ na ego n'ezie ụba ruo mgbe 2008, Otú ọ dị, ihe na-akpali ọrụ. Ihe ndị ọzọ bụ na-agbasa echiche. "The National Bank ekwere na n'aka kaadị na-asọ mpi pụọ banknotes na mkpụrụ ego" akwụkwọ akụkọ dere. Akwụkwọ akụkọ weere na-amalite na-eleghị anya echiche nke otuto na n'aka kaadị ebe a.
A nnọchiteanya nke National Bank na kwuru na ego nwere dara afọ nke na-agba ọsọ. Nke a bụ na ụbọchị mgbe iri ise trout
bụ banyere akwụsị. N'agbanyeghị eziokwu na isiokwu mụtara na ọ bụ nzuko omeiwu na ga ghara ịdị ire mkpụrụ ego na Riksbank na-agbanwe ugwo usoro iji nweta isiokwu echiche na mgbanwe ke ego nke ego bụ a n'amaghi-dịpụrụ adịpụ development. Kemgbe ahụ, bịara n'ikperé mmiri, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị Riksbank duziri ego mwepụ na ígwè aka site Omeiwu mkpebi, mkpachapụ na propagada. Nke a bụ dị ka mpụ a haziri ahazi ga-"ịkọ" na a ga-ọzọ mpụ na mgbe aga na e kpere mpụ ndị bụbu "buru amụma".
Agụ nwere ike na-eche na m na-eme ka a obot a spring. Ma nke a obere ngalaba na-ahụ pụtara dị ka a ihe na-agụ oké. Gịnị ka ọ bụ n'ezie? Ọ bụ eziokwu? Olee banyere-agbalị ịgbanwe ihe na-agụ? Ya mere, otu ga na-agụ aka izere ịbụ scammed. Mgbe ọ bụla isiokwu ị na-agụ ga-abụ na a nkeji ise obi iru ala-eche ma ihe e dere bụ eziokwu. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike ahụ site a na-miri nnọọ emi analysis na ya ikwubi na ọ na-adịghị. Ọ bụghị ike ịkọ ọdịnihu, mgbe gị onwe gị ịmepụta ya.
Ihe ga-kwuru bụ "play nke okwu" na cashless nduhie were. Ha na-ekwu ego-free n'ihi na ọ na-ada ka mma ma na-ego na-egosi dị ka ihe ezigbo echegbu nje. Mụ onwe m ahụwo site bluff na-eji okwu cashless. Ọ bụ iji tụnyere ihe dị iche n'etiti okwu anọzi n'ígwè ndị ngwọrọ na ndị ngwọrọ. Ma na nke ikpeazụ ahụ, asụsụ agbanweela ka mma.
The naanị ezi uru inwe ordvrängeriet iji okwu free ego bụ ma ọ bụrụ na ị na ugbu a na-chọrọ anya na nti n'akuku cashless ọmụma (na-agụ okwu nduhie). Mgbe ahụ ị pụrụ ịchọ okwu cashless kama cashless. Aware N'ezie na ọtụtụ ndị adịghị dị ka nwerela cashless akwado nwekwara mgbe ụfọdụ iji okwu cashless.
A prank bụ iji English okwu ego (ego) mgbe n'ezie na ọ bụ kpam kpam cashless technology. Best nke raping Swedish asụsụ bụ ezuru, Swedbank na ndị ọzọ dị ka ndị Bank na-eji okwu ego nkọ. Ebe a bụ a see okwu si Swedbank na website.
"N'ihi gịnị wepụ ego gị debit kaadị mgbe ị na ịzụ ahịa n'ụlọ ahịa. Mgbe ahụ ị ga-enweghị ihe mmezi tiketi na akụ. I nwekwara ike ịdọrọ ego ATMs. Ma ọ bụghị dị ka ego nkọ."
One, ma ọ bụrụ na o kwere omume, ọbụna ihe nzuzu oku si Internet enwezu dumspråket.
"Kagbuo ego ma na-Cash Smart!"
Of echiche, otu onye nwere ike ịghọta na a ga-ego smart bụ iji dị ka obere ego dị ka o kwere ma ọ bụ ọkacha mma onye ọ bụla mgbe niile. Na nke a na ọjọọ ordlogik okwu ga-egosipụta nkọ pụtara ịkwaga dị ka obere ka o kwere. N'ịbụ a nri ahia ga agụụ onwe ha ọnwụ. Lee otú ị na-agbalị ịgbanwe ihe anyị na asụsụ?
Ònye nwere oge ịdọrọ ego na nri ehihie?
Ka anyị na-ekpeghachi Swedbank e kwuru na aga na ngalaba.
Ị adịghị ekwu okwu banyere na kama ida oge ọzọ ga-eme ka iwe ọtụtụ withdrawals site na-ewere ego na ụlọ ahịa ma ọ bụ vending igwe. The akụ bụ mgbe nso a ndibiat. Na igwe ndọrọ ego igwe na-echekwa na ọ na-queues. N'ụlọ akụ na-aghọ mkpumkpu queues na akụ counters obere ka ị na jikwaa iji na-aghọgbu ndị mmadụ na ịdọrọ ego n'ebe ọzọ. Ma ọ bụ na-na ọ pụtara na isi na-enwe ịzụta a mkpọ ákwà nhicha n'ime ụlọ ahịa na-ebu gburugburu dị nnọọ ka ego. The ndị ọzọ ndị mmadụ na-amalite izu a swiiti mmanya na mgbe ahụ na-arịọ maka SEK 200 na ego, ihe ịtamu ọkọkpọhi ya na-echekwa, na ọ bụ n'ezie ihe ziri ezi. "The ụlọ akụ outlets" ke igbe ọrụ bụ
"Kagbuo ego ma na-Cash Smart!" na niile a na ọnwụ n'ihi na azụmahịa. Ọ bụ naanị ndị anyaukwu na anoghi n'ulo oba na-erite uru site na ya. Dị mwute ikwu na, ọ bụ a mere na azụmahịa harping na kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụ ihe kasị adaba ịdọrọ ego dị n'ụlọ akụ. Mgbe ahụ ị pụrụ mgbe kacha mma kpọpụta ndị zuru ọnwa njuputa na otu oge.
Dị mwute ikwu na, ụlọ akụ na-emeghe awa na maka inweta akụ counters ruo ogologo oge pụtara na-arụ ọrụ ndị nwere nsogbu onwe gị oge ịdọrọ ego na nri ehihie ma ọ bụ mgbe ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ụlọ akụ ahụ nwere naanị otu ụlọ akụ counter ebe ọ bụ na kasị mma ịdọrọ ego. Na mbụ, mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ. Ihe atụ, na nri na-echekwa, o doro anya na ọ ga-emeghe ihe mmezi ego mgbe e ogologo kwụ n'ahịrị. Gịnị ga-akụ na-adịghị eme otu ihe ahụ? Extra ọrụ n'ụlọ akụ bụ nwekwara uru ma ọ bụrụ na ihe na-n'ikiri ụkwụ ma ọ bụ gbuo oge.
Ihe isi ike nke wezụgara ego dị n'ụlọ akụ apụtaghị na igwe ndọrọ ego igwe na ndibiat bụ ezi nhọrọ. Ọ dị ya nnọọ na-egosi na ị na-consciously na-achịkwa ihe niile ebe. Bụghị dịghị ihe ọzọ bụ na ndọrọ ego nke ụlọ akụ mma. M Kwesịrị nwekwara amaja-ntakịrị ọrụ ahịa iwu, ndị mmadụ ga-arụ ọrụ mma na mkpumkpu arụ ọrụ ụbọchị na a ogologo nri ehihie, mgbe ahụ, ihe nwere ike na-rụrụ. Gịnị mere na chọrọ sextim- March ụbọchị na agbanyeghị?
Private nche ụlọ ọrụ
Onye na-adịghị nwere ọtụtụ ugboro hụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na ọchịchịrị uniforms ebu gburugburu arọ nche akpa na ego. Ụlọọrụ akụkọ ihe mere eme bụ isiokwu nke takeovers na mergers. Otu ihe atụ bụ nche ụlọ ọrụ ABAB (tọrọ ntọala na 1964) na mgbe a afọ ole na ole ghọrọ Partena Security. Partena Security ka n'aka na-ere ka Sodexho (France), Falck (Denmark) na Group 4 Securicor (UK).
Group 4 Securicor na-eleghị anya mma mara n'okpuru ya acronym G4S na ụlọ ọrụ ego na-ebusa na Sweden Ezuru ji helikọpta ohi. British nne na nna ụlọ ọrụ, G4S bụ kasị nche ụlọ ọrụ. Mba, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ihe karịrị 100 mba.
The ụlọ ọrụ na-ekewa n'ime ọtụtụ sub-eme.
N'ịbụ ndị a maara na-na Securitas headquartered na Stockholm na-arụ ọrụ na ọtụtụ mba. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ aha na e tọrọ ntọala na 1934 na Helsingborg site Erik Philip-Sorensen ka Hälsingborgs nche. The logo mejupụtara nwere obere nke atọ red ntụpọ na-anọchi anya ihe n'eziokwu, na-amụ anya na nyeere ya aka. Ọ bụ Melker Schörling, onye gburugburu 1990 mere Securitas mba. Around uzo nke narị afọ iri, Securitas aka ekedep elu abụọ nnukwu US nche ụlọ ọrụ Pinkerton na Burns.
Securitas kewaa mgbe nchoputa rere ya ka ndị ikom abụọ. Ọ bụ ugbu a na-akpọ G4S bụ ndị mba ọzọ na akụkụ nke "Securitas Sons nketa" (na-agụ zuo). G4S a na-akpọ na Sweden na mbụ Falck Security. O nwere ya n'isi ụlọ ọrụ dị na Falck Ụlọ Nzukọ Stockholm. Falck Security mara na njikọ na ikpe na-akpọ Falck mgbaru ọsọ ma ọ bụ cam mgbaru ọsọ. Nke a metụtara iri ngarị na Stockholm Transport.
Loomis malite ike deere azụ mgbe American Lee Loomis tọrọ ntọala Cleary Creek Comercial Company nke e ebu gold na onunu na Alaska. Loomis ụlọ ọrụ maka iga na armored ugbo ala (ụwa mbụ bụ otu n'ime ha) zụtara elu a yiri azụmahịa si Wells Fargo. Ke akpa 2000s gụnyere merged ụlọ ọrụ Securitas. Loomis ntem mbụ ihe American ụlọ ọrụ na-eme n'ọdịnihu ghọrọ a Securitas ụlọ ọrụ.
The abụọ kasị ukwuu ego njikwa ụlọ ọrụ na usoro nke mgbasa bụ ugbu a Loomis na Norwegian Nokas. A nnọọ nnukwu akụkụ nke ọrụ maka ịrịba ego na ha management abụọ
agbata obi. Norway na (dị ka anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na akwụkwọ) Finland site Sweden na-enye ohere a privatized Finnish mints amị Swedish ego. Ọ bụ crazy ghara nwere zuru mba na ala-achịkwa ahụ na ego n'ime na site na Sweden.
Nokas e hiwere na 1987 ka Nche Service nke Heine Wang. Operations na-eduzi isi na Nordic mba na na-headquartered na Tønsberg. Nokas Reserve na Gothenburg e mabu dị ka Skandia Reserve. Nokas ego njikwa na Sverge e mbụ maara dị ka G4S. Nokas nwekwara nwere 1995 tọrọ ntọala Swedish Bevakningstjänst (SBT), nke ghọrọ nke atọ kasị ukwuu nche ụlọ ọrụ na Sweden. Mkpụrụ ego management a na-eme ọtụtụ mgbe site obere ulo oru. Sweden e abuana ke a ịrịba nkezi nke ego na ụwa. niile
ekokwasị mere ọ dịghị ụzọ ejikọrọ, Securitas, G4S-Falck Loomis- Nokas.
Mgbe ụfọdụ na-ekokwasị nche ụlọ ọrụ na mepụtara ọnụ. Kjell Lindskog tọrọ ntọala na 1995 na ụlọ ọrụ SQS Security Qube System. Lindskog mepụtakwara a nchekwa akpa na ink na electronics nke ụlọ ọrụ ya bụ nke mbụ na-eji. Safety technology ka gụnyere GPS na nzuzo nke ink. Lindskog nwekwara wuru ọduọ ụgbọala na mepụtakwara variants nke tennis rackets na skai okporo osisi ya. Ndị nnyocha e mere nke na ụlọ ọrụ na ha nwekọrọ mmekọrịta abụwo n'ezie obere mgbagwoju anya maka onye na-agụ dị ka ọ bụ maka edemede na mbu.
The banyeghachi n'ụgbọala anyị na-ebu ego trumpeting evoking nnukwu akwụkwọ ozi na nke a bụ a ụgbọala si Securitas na Loomis. Ọ ga-N'ezie ịkpọsa ha ụlọ ọrụ aha. Ma na ike dum obodo ego nwere ike a ga-eji na-anọpụ iche unmarked ụgbọala na-adịghị lewe ya. Ọ dịghị onye kwesịrị n'ezie ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere a nche van ma ọ bụ a ụgbọ ala jupụtara mkpụrụ igbe. Ndị ọrụ ga-adịghị mkpa nwere uwe ọrụ akara na ihe ọ bụla ego njikwa ụlọ ọrụ aha. Ha ga-enwe ike ikwu na ha na-a mma n'ụzọ. Ebe ọ bụ na-amụta na ụlọ ahịa n'oge na-adịghị aghọta ha onwe ha "ego Ihọd." A atọ mma ga-abụ ka azụ na akpa a obere ihe na-anọpụ iche na "adịghị ahụ anya".
E nwere ọtụtụ ihe na-amụta site real-ndụ spy arụmọrụ. Ebe na-agba ọsọ abụghị gburugburu na ikpọ egwuregwu ụgbọala a la James Bond. The ụgbọala na-na-abụghị ọcha ụgbọala ezinụlọ ma n'okpuru hundu lurks a moto na okwu nke na-fledged na mma-nọgidere na-enwe ígwè. Na-apụtaghị na ị mgbe niile kwesịrị ụgbọala gburugburu ego na nkịtị ụgbọala. The banyeghachi n'ụgbọala anyị na-N'ezie-emekarị ihe bara uru. The ọchịchị ego arụmọrụ ga na-ekwe na-agbaji ọbụna n'ụzọ ego, ma na ala ga-N'ezie njikere ozugbo
igba ọhụrụ ego ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. The anoghi n'ulo oba ga-gbochie si tinye n'ọrụ ego management usoro nke mere na mbụ.
EMV - "Ụdị skulls"
EMV bụ uwa nile ụkpụrụ kaadị ịkwụ ụgwọ. Ọ na-eji mobile ịkwụ ụgwọ mobiles nwere yiri technology. Ndị ọzọ na ụdị mobile ịkwụ ụgwọ technology yiri EMV. Ọkọlọtọ nwere aha dị iche iche na mba dị iche iche na-emetụta contactless technology ebe ọgụgụ na a anya si kaadị agụ. Ọkọlọtọ na-achọ ma mgbe smartcards na contactless technology na-arụ ọrụ n'otu oge. E nwere ụzọ na-esi pụọ magnetik straipu kaadị. EMV anọchi Europay, MasterCard na Visa nke bụ ụlọ ọrụ na-izizi ọkọlọtọ. The technology mbụ eji na France, 1992.
Ke EMV kaadị magnetik straipu otú mgbe dochie mgbawa na a PIN a chọrọ. The koodu nwere ike banye ma via a kaadị agụ, via a obere ngosi na kaadị ma ọ bụ iji a software okwu "integrated keyboard" echekwara na kaadị egosipụta na-agụ ngwa. MasterCard na Visa agha nke na-ere ụlọ ọrụ a ọhụrụ technology site ahịa iji ochie magnetremsetekniken ẹkenịmde ego dara iwu na ikpe nke wayo. Nke a strangely bụghị nabatara United States dị ka nanị ná mba ụwa. Visa na-arụ ọrụ iji mee ngwangwa ntughari ka EMV technology na United States tinyere
18 EMV - "Ụdị skulls" ihe a na-akpọ Technology Inovation Mmemme. Asambodo na-rụrụ site na ihe na-akpọ EMVCo.
Vecka 9, söndag 7 mars 2021 kl. 19:30